Onye debanyere aha njigide nwere mgbọrọgwụ na ụlọ ọrụ akwụkwọ akụkọ. Afọ ole na ole gara aga, arụrụ m ọrụ maka otu ụlọ ọrụ na-ere ahịa data ọkachamara na Ndenye aha Ndenye akwụkwọ akụkọ. Otu n'ime usoro dị mkpa maka ịkesa na azụmaahịa maka atụmanya nke ndenye aha bụ ikike ha nwere 'idowe'. Anyị achọghị (mgbe niile) ịzụ ahịa na atụmanya ndị na-agaghị ejigide nke ọma, mgbe anyị chọrọ inweta atụmanya dị mma, anyị ga-ere ahịa na agbata obi na ezinụlọ ndị anyị maara na ha ejidere nke ọma. Yabụ, ha jidere izu 13 pụrụ iche wee gbaa akwụkwọ, ha ga-emegharị ma rapara gburugburu.
O juru m anya na, nyere uru nke adreesị ozi-e, ndị na-ere ahịa email anabataghị nyocha njigide. Nyocha njigide na ndị debanyere aha email bara uru maka ọtụtụ ihe:
Ihe nlere nke m nyere ebe a bụ nke mebere kpamkpam, mana ị ga - ahụ otu ọ ga - esi nyere aka. N'okwu a, (lee eserese) enwere nkwụsị na izu 4 yana ọzọ na izu 10. Ọ bụrụ na nke a bụ ezigbo ihe atụ, enwere m ike itinye ụfọdụ ọdịnaya dị ike gburugburu akara izu 4 nke na-agbakwunye ụfọdụ zip na mkpọsa ahụ! Otu na izu 10!
Iji malite, spreadsheet m na-eji na-ewere onye ọ bụla debanyere aha ma gbakọọ ụbọchị ha malitere na ụbọchị wepu aha ha (ma ọ bụrụ na ha edeghị aha. Jide n'aka na ịlele ngụkọta oge - ha na-arụ ọrụ dị mma nke ịzobe ozi ebe ọ kwesịrị ịdị oghere na-agụta nanị na ọnọdụ.
You'll ga-ahụ grid ahụ na - eweta ụbọchị niile edebara aha ha ma ọ bụrụ na ha edeghị aha. Nke a bụ ozi m ga-eji na ngalaba nke abụọ nke nyocha iji gbakọọ ọnụego njide na izu ọ bụla.
Usoro njigide dị mma na ụlọ ọrụ ọ bụla nke na-atụle ndenye aha, mana enwere ike iji ya iji nyochaa njigide maka ụlọ ọrụ ndị ọzọ - nnyefe nri (ole nnyefe na ugboro ole tupu mmadụ apụ maka ezigbo… ikekwe 'ekele' pụrụ iche tupu oge ahụ Akara dị n'usoro), ịkpụ ntutu, mgbazinye ihe nkiri… ị ga-akpọ ya ma ị nwere ike gbakọọ njigide na njigide maka ndị ahịa gị.
Nke a bụ naanị ihe atụ siri ike m tinyere ọnụ maka ọkwa a. Agbanyeghị, ọ na - ejide ozi niile ịchọrọ iji nyochaa njigide gị. Naanị pịa aka na eserese dị n'okpuru ebe a ma mee 'Chekwa Ka' ibudata mpempe akwụkwọ m wuru na mpaghara.